Ogaden News Agency (ONA) – Al-Camuudi iyo Wayaanihii la socday oo ku fashilmay Washington DC
Al-Camuudi iyo Wayaanihii la socday oo ku fashilmay Washington DC
Maalmahanba waxaa socday isku-day ay wadeen Wayaanaha iyo ninka lagu magacaabo Al-Camuudi oo ah maalqabeen Sacuudi ah. Waxaa la kireeyay garoonka cayaraha ee loo yaqaano RFK Stadium oo tobonaan kun ay fadhiisan karaan in lagu qabto waxay ugu yeedheen Habeenka Dhaqanka oy u bixyeen AESAONE. Waxaa ku baxay xayaysiintii Habeenkaa loo sameeyay oo kali ah 2ba Malyan oo Doolar, iyadoo dayaarado looga soo qaaday Adisababa fanaaniin iyo daawadayaal.
Al-Camuudi ayaa hadda doonaya, ka dib markay ku fashilmeen shirkado badan, inuu lacagtiisa u adeegsado dacaayad u samaynta xukuunka Wayaanaha. Al-Camuudi ayaa la sheegaa inuu Wayaanaha ku xidhnaa waagay dagaalamayeena oo lacag badan uu siin jiray, waxayna abaalmarin uga dhigeen markay qabsadeen xukunka TPLF-ta inay siyaan dhul balaadhan oo Dahabka laga qodo iyo dhul beereed kumanaan KM oo wareeg ah oo laga siiyay gobolka Gambela ah.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa isku gadaamay goobtii loogu talagalay in lagu qabto xaflada boqolaal shacabka Itobiya ah oo ku banaabaxayay, iyagoo qofkii damca inuu galaba uga warmayay dhibaatada ay kooxda Wayaanaha ah iyo Al-Camuudi ku hayaan shacabka Itobiya, taasoo dhalisay inay dib uga noqdaan.
Waxaa goobta yimid oo kali ah dad lagu qiyaasay sida ay sheegtay Ethiopian Review oo Filmka hoosena aan ka soo xiganay dad lagu qiyaasay 1500 oo badankood ay ahaayeen kuwii laga keenay Adisabab halkaasoo 3ex dayaarad ay soo daadgureeyeen.
Waxaa hubaal ah in waxay ka cabsanayeen Wayaanaha uu dhab ku noqotay oo Jaaliyadaha S.Ogadenya looga dayday hadda nidaamka fashilinta isku dayga Wayaanaha uu ku doonayo inuu ku soo dhex galo jaaliyadaha. Saxafigii ka kacay shirkii uu ka soo qaybgalay KT Meles Zinawi ee ku ceebeeyay goobtaa xataa waxaa kaga horeeyay dhalinyaradii kaga kacay shirkii ay doonayeen Wayaanaha inay ku qabsadaan Las Vegas oo xubnihii 4ta ahaa ee ka socday jaaliyadeena ay ka kala tureen ka dib markay ka dhex kaceen shirka oo lagaga dayday ka dibna gacanta la’isula tagay halkiina lagu kala dhaqaaqay.